नेपालमा भित्रियो सलह किरा, के हो सलह किरा ? « On Khabar
नेपालमा भित्रियो सलह किरा, के हो सलह किरा ?
१३ असार, काठमाडौं । नेपालमा सलह किरा भित्रिएको छ । बारा र सर्लाही जिल्लामा सलह किरा देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बारा र पर्सामा सलह किरा देखिएको खबर प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए ।